Taiwan Oo Mar Kale Ku Celisay Inay Sii Xoojinayso Cilaaqaadka Ay la Leedahay Somaliland | HAATUF ONLINE
Home » Somali News » Taiwan Oo Mar Kale Ku Celisay Inay Sii Xoojinayso Cilaaqaadka Ay la Leedahay Somaliland
Taiwan Oo Mar Kale Ku Celisay Inay Sii Xoojinayso Cilaaqaadka Ay la Leedahay Somaliland
Taipei, July 6, 2020 (Haatuf) – Wasaaradda Arrimaha Dibadda (MOFA) ayaa Isniintii maanta mar kale ku celisay in Taiwan ay sii xoojinayso xidhiidhka laba geesoodka ah ee ay la samaysay Somaliland ka dib markii warbixin ay soo saartay ay muujisay isku dayo dhowr ah oo ay Beijing ku doonayso inay ka dhaadhiciso dowladda iskeed ugu dhawaaqday Madaxbanaanida ee Somaliland in aanay xidhiidh la sameynin Taiwan.
Wasaarada Arrimaha Dibada ee dalka Taiwan (MOFA) wax jawaab ah kama bixin doonto dedaallada la sheegay ee ay ku dhaqaaqday Safaaradda Shiinaha ee Soomaaliya si ay uga dhaadhiciso Somaliland inay joojiso xidhiidhkii ay la lahayd Taiwan, af-hayeenka wasaaradda Joanne Ou (歐 江 安) ayaa yidhi markii ay wax ka waydiisay warbaahinta CNA.
Ou ayaa carabka ku adkeeyay in dadaalada Taiwan iyo Somaliland ee lagu xoojinayo iskaashiga laba geesoodka ah ay ku salaysnaan doonaan saaxiibtinimo dheer oo dhexmarta dadka iyo qiyamka guud sida xorriyadda, dimuqraadiyadda, cadaaladda iyo xukunka sharciga.
Waxay kaloo sheegtay in Taiwan ay ballaadhin doonto iskaashiga ay la leedahay Somaliland si tartiib tartiib ah dhinacyada caafimaadka bulshada, tamarta, macdanta, waxbarashada iyo beeraha iyadoo la adeegsanayo habka Taiwan, taas oo kor u qaadaysa horumarinta iskaashiga labada dhinacba.
Ou wuxuu ka jawaabay warbixin lagu daabacay Buugga Taariikhda ee Somaliland Axaddii
Warbixintu waxay sheegtay in safiirka Shiinaha ee Soomaaliya Mr. Qin Jian (覃 儉) uu booqday Somaliland laba jeer bilihii la soo dhaafay si uu uga dhaadhiciyo dawladda Somaliland inay joojiso dhammaan hawlihii ay la lahayd Taiwan, isagoo xusay ilo badan.
Mid ka mid ah dalabyada Qin wuxuu ahaa in Beijing laga furo xafiis isku xidha Shiinaha oo ku yaal magaalada Hargeysa, sida lagu sheegay warbixinta.
Madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi iyo wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah Yaasiin Xaajii Maxamuud Xiir, ayaa diiday codsiga Qin, warbixinta ayaa lagu sheegay.
In kasta oo Beijing ay sheegtay inay isku dayeyso inay ka dhaadhiciso Somaliland inay joojiso la shaqeynta Taipei, Ou wuxuu sheegay in Taiwan aanay u hogaansanayn cadaadiska Shiinaha ayna sii wadi doonto inay sii waddo iskaashiga ay la leedahay waddamada isku fikirka ah isla markaana ay u noqoto “xoog wanaagga” bulshada caalamka.
Bishii July1-keedii, wasiirka arrimaha dibedda Taiwan Joseph Wu (吳 釗 燮) wuxuu shaaca ka qaaday in Taiwan iyo Somaliland ay gaadheen heshiis bishii February ay isku dhaafsanayaan xafiisyo matalaya labada dhinac.
Labada dhinacba waxay dhowaan magacaabeen mas’uuliyiin xilal ka qaban doona xafiisyadaas, in kasta oo taariikhda rasmiga ah ee furitaanka xafiisyada aan wali la shaacin.
Somaliland, oo ku taal Bariga Afrika, waxay ku dhawaaqday madax-bannaanideeda 1991 kadib dagaal sokeeye oo ka dhacay Soomaaliya. Hase yeeshee wali looma aqoonsan Somaliland dal ka mid ah beesha caalamka.
Si kastaba ha noqotee, Somaliland waxa ku yaal inka badan 20 xafiis oo wakiillo dalal kala duwan ah, halka waddamo iyo ururro caalami ah sida Ingiriiska, Turkiga, Canada, Midowga Yurub iyo Qaramada Midoobay ay ku leeyihiin Xafiisyo.
(Waxaa qoray Emerson Lim)